Europe yekutengesa magetsi bike | ebike Shuangye
musha Ikopeti yeEurope motengesi yemagetsi
Kuendesa kubva kuUK:
2.0 VAT uye 0 mutero
3.Fast mushure mekushandira
4.Small batch order uye yakaderera njodzi (MOQ≥10）
Gomo Magetsi Bike A6AH26 ine 36v 10ah bhatiri mune furemu, 250w isina girazi isina mabhurashi emota, max kumhanya 25km / h, 36v 10ah bhatiri rakavanzika, 26 inch gomo bhasikoro furemu, Shimano 21 kumhanya, 1: 1 PAS mubatsiri kana torque sensor. Mavara maviri sarudzo - Dema uye Ichena. Iyi gomo yemagetsi bhasikoro sutu yakawanda terrains uye shandisa, senge kuenda, kunze kwemugwagwa, nzvimbo ine makomo, ect.
Guta Magetsi Bhasiketi A5AH26 tora Black yakavanzika bhatiri bike furemu dhizaini, 36v 10ah inobvisa lithium bhatiri, stanard 36v 250w brushless hub-mota, max kumhanya 25km / h, max range pamutero 40-60km. Inogona kukwira mudhorobha kana gomo, iri sarudzo yakakura yekushandisa yakawanda.
Mamwe Magetsi Bikes:
Folding Magetsi Bike A1-7 foldable stem bike frame, 36v 10ah bhatiri rinobviswa, fashoni dhizaini, max kumhanya 25km / h, 36v 250w mota, 100-240v yekupinda chaja. Izvo zviri nyore kutakura mubhazi, Subway uye Trunk yemota.
Urban Kuenda Magetsi Bike A3AL28 ine 24/28 inch yakakurumbira guta bike furemu dhizaini, maviri mabhatiri masisitireti (akavanzika bhatiri uye kumashure bhatiri bhatiri), 24v / 36v 250w mota, 24v / 36v 8ah / 10ah bhatiri, kumiswa kwe al-alloy pamberi forogo kana simbi pamberi forogo, V- brake kana 160mm disc brake. Kuchipa uye varitey yeakakuunzi unounza iwe sarudzo dzakasiyana.
Fat mafuta Magetsi Bike A6AH26F iine 26 ″ * 4.0 Kenda mafuta vhiri, chechitatu chizvarwa chakakwidziridzwa bhasikoro furemu, 36v 10ah yakavharidzirwa bhatiri uye 36v 250w mota, aluminium alloy kuturika pamberi peforogo, hukuru hukuru LCD inoratidzira. Gungwa, chando, chikomo, jecha, guta, zvese izvi zvinogona kubata.
Floding Mafuta Tyre EBike A7AM20 shandisa 20 ”* 4.0 mafuta aneta, aluminium alloy folding frame, 36v 10ah inobvisa bhatiri, 250w isina girovhu hub mota, yakajairwa SHIMANO 7 kumhanya, tektro 160mm disc brake, simbi fenders uye kumashure rack, 3W LED kumberi taa ine USB yekuchaira chiteshi. Chero ipi yemakungwa, echando kana yemadhorobha, iwe unogona kuikwira.
Foldable Magetsi Scooter A1-8 ine 8/10 inch aluminium alloy frame, 36v 4.4ah / 6.6ah / 8ah / 9ah / 10ah yakavanzwa bhatiri, 250w brushless hub mota, 25-32km / h max kumhanya, 3W LED headlight ine USB yekuchaira chiteshi. Chisarudzo chakanaka kune kuenda zuva nezuva.
Yakazara Kumiswa Gomo Magetsi Bike A6AH26-S shandisa 26 / 27.5 / 29 inch yakazara kumiswa aluminium alloy furemu, kumiswa pamberi foloko uye kumashure kushungurudza kunyudza, 36v 8ah / 10ah yakavanzika bhatiri, 36v 250w brushless hub-mota, Shimano 7/9 / 21 /27 kumhanya ine derailleur. Chisarudzo chikuru pagomo uye kutasva kutasva.
Classic Mountain Magetsi Bike A6AB26 ine yakakwira gomo ebike chimiro, 36v 10ah inobvisa bhatiri bhatiri, 36v 250w hub mota, max kumhanya 25-30kn / h, kuratidzwa kweLCD, TEKTRO 160mm disc brake. Iyo yakakurumbira bur inoshamisira gomo rakasangana.
Torque Sensor Magetsi MTB A6AB26T shandisa torque sensor (inogona kupa simba rakasiyana zvichienderana nesimba rekufamba-famba), SHIMANO 7/9 nekumhanya ne derailleur, 36v 250w brushless mota, 36v 10ah lithium bhatiri, max kumhanya 25km / h, mhando pakudhara 40-80km.
Isu tinotenda mabhasikoro emagetsi ari kuchinja pfungwa yekufamba ichipa yakachena, inoshanda uye inonakidza nzira nyowani yekutakura inodhura kune vese. Joinha isu nhasi muchimurenga chegreen chinoshanda kutakura muchitaira.
Makore gumi nemaviri 'ruzivo mukugadzira emagetsi mabhasikoro, uye kupa mamwe emagetsi mabhasikoro emusika weEurope
Ndapota taura nesu kana uchida kuziva zvakawanda:
TISVIRE USI MUFUNDO kana VISITSI OFFICIAL WEBSITE
Bhasiketi mabhureki: Maitiro ekugadzirisa mabhureki emabhasikoro